समाज कल्याणको उपाध्यक्षमा मन्त्रीकी बुहारी
मैले होइन, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो : मन्त्री रेग्मी
नियुक्ति अशोभनीय, सुशासन ऐनको भावना तथा सर्तविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल रहेको भन्दै कांग्रेसनिकटकै विरोध
मंसिर २२, २०७८ जनकराज सापकोटा
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नै बुहारी मोनिका भट्टराईलाई समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि आलोचना सुरु भएको छ । साताअघि कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्थाहरूको महासंघले मन्त्री रेग्मीलाई भेटेर आफ्नै बुहारीलाई उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्नु अशोभनीय र स्वार्थपूर्ण काम भएको भन्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएको थियो ।
मन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुशासन ऐनको दफा ६, ८ र १८ ले सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले परिवारका सदस्यलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्ने कुरालाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको मानिँदैन ।’ महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नियुक्ति अशोभनीय, सुशासन ऐनको भावना तथा सर्तविपरीत र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।
महासंघका महासचिव मनोजकुमार कँडेलले मन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थमा परेर बुहारीलाई नियुक्ति गरेकाले विरोध जनाएको बताए । उनले भने, ‘निर्णय सच्याउन भनेका छौं । यस्तो नियुक्ति फिर्ता नगरे हामीले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने कुरा विज्ञप्तिमार्फत बताएका छौं ।’
गैरसरकारी संस्थाहरूको काम–कारबाही नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न भन्दै गठन भएको समाज कल्याण परिषद्‌ मन्त्री फेरिएपिच्छे राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा अस्तव्यस्त बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मात्रै परिषद्ले ३ सय ३४ गैरसरकारी संस्थाको परियोजनालाई द्रुत स्वीकृति दिएको थियो । परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ६ सय ९९ गैरसरकारी संस्थाले सुरु गरेका १ हजार १ सय १० परियोजनाले १४ अर्ब ६२ करोड ६२ रुपैयाँ बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्छन् ।
बिहेपछि अमेरिकामा बस्दै आएका रेग्मीका छोरा र बुहारी केही समयअघि मात्रै नेपाल बस्ने गरी फर्केका थिए । कान्तिपुरसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा मन्त्री रेग्मीले भने आफूले नभई गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको बताइन् । उनले क्षमतावान बुहारीको नियुक्तिलाई लिएर विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको बताइन् । आफूले समाज कल्याण परिषद्मा व्यापक सुधारका काम सुरु गरेपछि विरोधीले यस्तो कुरा उचालेको दाबी उनले गरिन् । साथै उनले परिषद्‌बाट काम नै नहुने भएपछि परियोजना स्वीकृतिका लागि विभिन्न देशका राजदूत मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।
अरू कैयनले परिवारकै मान्छे मन्त्रालयमा पीए र लाभका पदमा राखे पनि आफूले त्यसो नगरेको बरु सेरोमोनियल खालको पदमा राखेको दाबी गर्दै उनले थपिन्, ‘मेरो बुहारी भएकै कारण काम गर्नै नदिने त ? अरूको त परिवारकै मान्छे पीए बनेर हिँड्छन् । मेरो त त्यो पनि छैन ।’
समाज कल्याण परिषद्मा उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर भएको विवादमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
यो गठबन्धनको सरकारको निर्णयअनुसार क्याबिनेटले गरेको निर्णय हो । यो मैले मात्रै गर्ने कुरा भएन । अर्को कुरा मेरो बुहारी नाता पर्‍यो भन्दैमा योग्य र क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि कहीँकतै काम नै गर्न हुँदैन र ? अरूका कसैका नाता–पाता कोही आएका छैनन् र ?
उहाँ अमेरिकाबाट फर्किनुभएको रैछ हैन ?
नेपालमै पढेर बिहे गरेर अमेरिका गएको तीन वर्ष भयो । अहिले सधैंका लागि यतै आएको हो ।
उहाँको क्षमता, योग्यताले समाज कल्याण परिषद्मा के योगदान मिल्छ त ?
ऊ त साइन्सको स्टुडेन्ट हो । अंग्रेजी, कम्प्युटर दुवै राम्रो छ । बिहे गर्नुअघि ऊ मेरै साथीको छोरी हो । बिहेअघि पनि विभिन्न संघ–संस्थामा काम गरेको मान्छे हो ।
कांग्रेसनिकटकै संगठनले यसमा विरोध गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएछ नि ?
कसैलाई आग्रह/पूर्वाग्रह लाग्छ भने छुट्टै कुरा हो । त्यो कुनचाहिँ उत्पातको लाभ हुने पद हो र ? उपाध्यक्ष सेरोमोनियल पदमात्रै हो । छोरा पनि बेलाबखत मन्त्रालय आएर सघाउँछ । कहीँ, कतै एक सुका पैसा खाने होइन । मेरो छोरा–बुहारी भएकै कारण काम गर्नै नदिने त ? अरूको त परिवारकै मान्छे पीए बनेर हिँड्छन् । मेरो त त्यो पनि छैन । छोरा–बुहारीले मलाई सफल बनाउन हेल्प त गर्नुपर्‍यो नि !
उपाध्यक्ष पदमै राखेको भएर विरोध भएको होला नि त ?
गठबन्धन सरकारले नै पत्याएर राखेपछि दुई–चार जनालाई टाउको दुखेर हुन्छ त भन्या ? नाता–पातालाई मैले उपाध्यक्ष राखें रे, के यो देशमा कसैले पनि नाता–पाता राखेकै छैनन् त ? मेरा छोरा–बुहारी योग्य छन्, अब्बल छन् भने उनीहरुले केही पनि काम गर्न नहुने ? हात बाँधेर बस्नुपर्ने त ? यस्ता विरोधले मेरो के कद घट्छ र ? के मैले राजीनामा दिनुपर्ने ?
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७८ २२:३६